यसरी फेरि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
यसरी फेरि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य ?
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य दुर्इ सय रुपैयाँले घटेको छ ।
म‌गलबार बजारमा सुनको मूल्य ५८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बुधबार घटेर सुनको मूल्य ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रबार फेरि तोलामा कतिले बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य ?
म‌गलबार बजारमा चाँदीको मूल्य ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बुधबार भने चाँदीको मूल्य ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।